KULMIYE iyo Xukuumadda oo soo Dhoweyn Diirran u Sameeyey Garab ka Fuqay Xisbiga UDUB | KULMIYE
KULMIYE iyo Xukuumadda oo soo Dhoweyn Diirran u Sameeyey Garab ka Fuqay Xisbiga UDUB
Hargeysa (Jam)– Xisbiga talada haya ee KULMIYE iyo xubno golaha wasiirrada ka tirsan oo uu hoggaaminayo Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa xaflad ballaadhan oo soo dhoweyn u sameeyey shalay garab miisaan culus leh oo ka go’ay xisbiga mucaaridka ah ee UDUB, kuwaasoo ku biiray KULMIYE.
Xaflad loo sameeyey garabka ka go’ay UDUB oo lagu qabtay xarunta xisbiga KULMIYE ee magaalada Hargeysa, waxa ka qaybgalay Madaxwayne-ku-xigeenka Somaliland Md. CabdiraxmaanCabdillaahi Ismaaciil (Saylici), hoggaanka sare ee KULMIYE, Wasiirrada Caafimaadka Dr: Xuseen Xoog, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Md. Cali Siciid Raygal, Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Marwo Samsam Cabdi Aadan, xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiillada iyo martisharaf kale oo xafladaas lagu casuumay.
Guddoomiye-ku-xigeenka 1aad ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed Kaahin Axmed oo xafladdaas ka hadlay, ayaa sharraxay qodobadda ay ku heshiiyeen garabka UDUB ee xisbigooda ku biiray.
“Waxaannu garabkan UDUB ee nagu soo biiray isla afgaranay si ay uga mid noqdaan hoggaanka sare ee xisbiga KULMIYE iyo guddi-hawleedyadiisa muddooyinka soo socda ee ololaha doorashada ilaa iyo shirwaynaha KULMIYE ee soo socda, waxaanuna si buuxda afgarad uga gaadhnay qaabka iyo hanaanka ay uga hawlgalayaan xisbiga, siyaabahaasna waxa ka mid;
1. Iyadoo la raacayo xeerarka iyo dastuurka xisbiga KULMIYE u yaal cid allaale iyo ciddii ka tirsan golaha baarlamaanka, maadaama ay KULMIYE noqdeen inay toos uga qaybgalayaan golaha dhexe ee xisbiga.
2. Waxa kaloo aannu isla garanay in toban xubnood oo guddiga fulinta ee KULMIYE ah raggani ka mid noqdaan oo ay ku biiraan guddiga fulinta ee KULMIYE.
3. Waxaannu isla meeldhignay oo kale siduu qorayo xeerka doorashada qaranka Somaliland oo u kala asdaysan degmo doorasho iyo gobol doorasho u kala xaddidan inay guddiyada doorashada dawladaha hoose ka qaybgalaya inay ka mid noqdaan afar xubnood oo xubnahan inala fadhiya iyo taageerayaashooda ka mid ah.
4. Waxaannu isla afgaranay maadaama ay dhaqanna tahay xeer xisbina tahay in guddiyada qabanqaabada shirwaynaha xisbiga ka mid noqdaan iyagoo markaa innaga mid ah,” ayuu yidhi Guddoomiye-ku-xigeenka xisbiga KULMIYE oo ka hadlayey qodobadda ay ku heshiiyeen garabka UDUB ee ku biiray.
Waxa kaloo isna xafladadas ka hadlay Mr. Maxamed Qaasin Xaashi oo hore uga mid ahaa guddiga fulinta ee xisbiga UDUB, kaasoo tilmaamay inay ku saxsan yihiin go’aanka ay ku gaadheen inay ku biiraan xisbiga KULMIYE, isagoo arrintaas ka hadlayeyna waxa uu yidhi; “Su’aalo badan oo lays weydiinayo ayaan doonayaa inaan inyar ka iftiimiyo. Waxa weeye isbbeddelka siyaasadeed ee meel inta laga tago meel kale la tagaa waa wax soo jireen ah, markaa haddaannu ka tirsanayn xisbigii UDUB, maantana ku biirnay xisbiga KULMIYE sax baannu ku nahay taas, taasoo aannu muddo badan ka fiirsananay xisbigii aannu u digo-rogan lahayn. Si fiican baannu u garanaynaa xisbiga KULMIYE, isaguna wuu na garanayaa. KULMIYE waa raggii annagoo midigta ku haysana hoggaankii iyo madaxnimadii qaranka intay naga dhirbaaxeen iyagu qaaday, waanuna garanaynaa waxay galaan iyo waxay gudaanba,” ayuu yidhi Maxamed Qaasin Xaashi.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa isaguna xisbigiisa ku soo dhoweeyey garabka UDUB, waxaannu xusay in KULMIYE iyo UDUB iska xigaan xisbiyada iyo ururrada cusub ee siyaasadda, isla markaana mataano ku yihiin dhismaha qaranka Somaliland.
“Waxa nasiib-darro ah in walaalaheenna Soomalilayeed uu dastuurkooda ku jiro Somaliland oo marka ay hadlayaan aanay carrabkooda ka reebin. Taasi waxay noqonaysaa in dhibaatada maanta koonfurta Soomaaliya haysata ee ay waxba is ku keeni la’yihiin ee Mahiga iyo caalamku dhexdhexaadinayo Ra’iisal-wasaarihii iyo Madaxweynihii waxay dhalayso waynu garanaynaa oo wax wanaagsan laga fil maayo
Waxa ayaan-darro ah ragga halkaa isugu tegay ee iyaga taasi haysataa in aanay weli afkooda soo marin waar haddaynu maanta turunturoona ayaa innoogu xiga Somaliland oo dad walaalaheen ah oo lixixdankii aynu midownay ee horta aan Ictiraafno oo aan maqalno, adduunkana aan la garab-galno oo iyagu ha ina daweeyeen. Horta taladu taas ayey ahayd oo wey ka luntay, mana filayo maantana inay horumar gaadhayaan.
Midna maanta Geeska Afrika, Somalia iyo Somaliland ku dhismi mayso amma Mahiga ha wado ama UN-ku ha wado, mid dhacaysana ma aha Somlia inta dawlad laga dhiso ayaa Somaliland laysku soo jiidayaa, waayo weynaan oggolayn oo waxa jira dad badan oo u badan ganacsato amma siyaasiyiin ah oo hungurigu ka dheer yahay oo durba ruxmaya oo leh haddii Xamar la dhiso oo lacag la geeyo tolow maxay noqon? Waxaan leeyahay raggaas waar iyadoo dawlad ah oo adduunku dhisayo oo lacag leh, oo dawladda Afrika ugu weyn ah ayaannu ka quusanay oo aannu ka goosanay ee ma maantaad ruxmaysaan?” ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE oo farta ku fiiqay in aanay waxba ka dhoweyn nabad ka aslaaxda dalka colaaduhu aafeeyeen ee Soomaaliya.
Madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici) oo ka qaybgalay xafladda soo dhawaynta ah ee loo sameeyey garabka UDUB, ayaa sheegay inay xisbi ahaan iyo xukumaad ahaanba farxad u tahay garabka UDUB ee KULMIYE ku biiray.
Garabka UDUB ee ku biiray KULMIYE waxa xubno ah wasiirro xilal ka hayey xukuumaddii Rayaale, xildhibaanno Golaha Wakiillada ugu jiray iyo masuuliyiin kale oo xisbigaas ka tirsanaa, waxaanay magacyadoodu kala yihiin:
Maxamuud Siciid Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Xasan Daahir Dhimbiil oo ahaa xoghayihii Somaliland u fadhiyey Itoobiya, Cali Axmed Cali (Yuufle) oo ahaa agaasimihii guud ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Abiib Xasan Filfil, wasiirkii hore ee Ganacsiga, Cabdirisaaq Waabari Rooble, wasiirkii hore ee Dalxiiska, Maxamed Aw Daahir Ibraahim oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee UDUB,Maxamed Cabdi Daa’uud, Badhasaabkii hore ee Gobolka Marood-ijeex, Maxamed Muuse Diiriye oo xukuumaddii Rayaale ka ahaa Agaasimaha Telefishanka Qaranka Somaliland, xildhibaanno xisbigaas ugu jiray Golaha Wakiillada oo ay ka mid yihiin Md. Cabdiqaadir Jaamac Xaamud, Md. Xasan Cawaale Caynaan, Md. Cali Diiriye Obsiiye (Gabiley), xildhibaan Maxamed Barkhad Miiggane, mudane Xuseen Cismaan oo UDUB ugu jiray goleyaasha degaanka, garyaqaan Barkhad Jaamac Aar iyo Maxamed Qaasin Xaashi.